Home Wararka Madaxda Ugu Sareeysa Dowlada Oo Xisbi Siyaasadeed Samesanyo(Sababta)
Madaxda Ugu Sareeysa Dowlada Oo Xisbi Siyaasadeed Samesanyo(Sababta)
Madaxda sar sare ee Dowlada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay dhawaan sameysan doonaan xisbi kaasi oo ah xisbi siyaasadeed ayna kaga soo muuuqan doonan doorashada dalka ka dhici doonto 2020-ka.
RW ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa tilmaamay in tilaabaddaan ay tahay mid muhiim ah, waxuuna sheegay in ay qeyb ka tahay dadaalka loogu jiro in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.
Sidookale waxuu sheegay in haatan la diiwaan galiyay xisbiyo siyaasadeed oo ka soo qeyb gali doona doonashada islamarkaana ay socdaan dadaalo badan oo lagu dar dargalinayo howlaha doorashada laxiriira.
Guddiga doorashooyinka oo ay hor bodeyso Xaliimo yareey ayaa wad daadlo ku aadan sdii dalka ay kaga dhici laheed doorasho qof iyo cod ah waxaana ay wadaan dadaalo ay ku diiwan galinayaan xibiyada siyaasadeed ee ka jira dalka soomaaliya.
Previous articleWasiir katirsan Xukumada Khayre Oo Fashiliyay Sirta ka danbeysa Booqashada Farmaajo ee Asmara.
Next articleQorshe Nucee ah ayaa kadanbeeyo Kala dirida Ciidanka Nabadsugid Gobolka Banaadir(Warbixin)
Kalfadhiga 5-aad ee golaha shacabka oo Berri furmaya!!
Kheeyre oo xariga ka jaray mashaariic laga hirgelin doono Jubbaland